Apple Music iyo miyir-qabka ay wajaheyso isbeddelada ku dhaca royalty-ka muusiga | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | 19/07/2021 10:00 | Apple Music, Noticias
ka adeegyada fidinta muusikada waxay gumaysteen bulshada. Far waa guulaha iibka cajaladaha jireed ee loogu talagalay farshaxanada adduunka oo dhacay waqti aan fogayn. Si kastaba ha noqotee, ka dambeeya istiraatiijiyadda qulqulka cusub ayaa ah royalties-ka muusiga ama boqortooyada ee adeegyadu siiyaan fanaaniinta iyo shirkadaha diiwaanka u ah loogu talagalay dhageysiga barnaamijyadooda. Kani waa mowduuc miiska saaran bil walbana waxaa jira fanaaniin badan oo leh waa in lacag badan laga qaadaa muusikadooda. Hindisaha dowladda Ingiriiska ayaa looga golleeyahay in lagu kordhiyo xuquuqda boqortooyada fannaaniinta iyo barnaamijyada sida Apple Music waxay muujineysaa jahwareerkooda iyo taxaddarkeeda.
1 Isbedelada xuquuqda muusikada, ka dib warbixin UK ah
2 Apple Music: 'Waa ganacsi ciriiri ah'
3 Xalka mustaqbalka ... iyadoo aan loo jeedin in badan la beddelo
Isbedelada xuquuqda muusikada, ka dib warbixin UK ah
Dowladda UK waxay leedahay Wasaaradda Dhaqanka, Warbaahinta iyo Ciyaaraha oo uu madax u yahay Nicky Morgan. Markii ay soo jeedisay wasaaradan, waxaa la abuuray Guddi u xilsaaran daraasaynta dhinacyada kala duwan ee wasaarada si ay u sharciyeeyaan una daneeyaan dadka ay wasaaradu matasho. Mid ka mid ah mashaariicda ay Guddigu soo bandhigeen Oktoobar 2020 ayaa ahayd saameynta dhaqaale ee qulqulka hadda jira. Sida laga soo xigtay warbixin ka socota baarlamaanka Ingiriiska, Istuudiyahaan loogu talagalay:
Tijaabi saameynta dhaqaale ee qulqulka muusikada uu ku leeyahay farshaxanleyda, calaamadaha duubista, iyo joogtaynta warshadaha miyuusigga guud ahaan.
Dukumiintiga ay daabaceen guddiga oo ay dirtay dowladda UK ayaa muujinaya in heesaha hadda socda ay soo saaraan in ka badan hal bilyan oo rodol sanadkiiba in ka badan 115 bilyan oo aragti sanadkiiba. Si kastaba ha noqotee, oo halkan waa furaha, farshaxan yahanadu waxay helaan oo keliya 13% dakhliga soo xarooda.
Guddoomiyaha Guddigu wuxuu xaqiijiyey:
In kasta oo socodka socodka uu keensaday guulo wax ku ool ah warshadaha muusikada ee la duubay, hibada ka dambeysa - kuwa wax qabta, kuwa wax qora, iyo kuwa wax qora - ayaa luminaya [lacag] Kaliya dib ubilaabida gudbinta oo kaliya ayaa kufilan doonta in sharciga lagu qoro xuquuqdooda in si cadaalad ah faa'iidada laga helo.
Apple Music: 'Waa ganacsi ciriiri ah'
Daraasadda ay sameeyeen Guddiga ayaa soo uruurisay xaqiiqooyinka shirkadaha rikoodhada, farshaxanada, siyaasiyiinta iyo shakhsiyaadka muhiimka ah ee adeegyada fidinta muusikada. Iyada oo ujeedadu tahay in lagu darso muhiimadda dhibaatada waxay ku guuleysteen inay bixiyaan xeelado taasi waxay xallin laheyd saameynta xun ee royalty-ka muusikada hooseeya ee farshaxanleyda.
Mid ka mid ah waxqabadyada, Apple Music ayaa loo oggolaaday inay dhiibato ra'yigeeda. Waxay ahayd Elena Segal, Agaasimaha Daabacaadda Muusikada ee Apple, oo wax ka iftiimiyey arrinta ku jirta safka Big Apple:
Waxaan la tartamaynaa kuwa bilaashka ah. Waxaan la tartameynay bilaash, sharci ama sharci darro, tan iyo bilowgii iTunes… iyo ku tartamida bilaashka ah had iyo jeer waa mid aad u dhib badan maxaa yeelay macaamiisha waxay leeyihiin ikhtiyaar ay u leeyihiin inay xor ku baxaan… Uma maleynayo adeeg xayeysiinta lagu taageerayo inuu dhalin karo dakhli ku filan taageer nidaamka guud ee deegaanka.
Laga soo bilaabo Apple iyo shirkadaha kale ee waaweyn waxay hubiyaan taas ganacsiga boqortooyada muusikada ee ka imanaya adeegyada muusikada ayaa ku yaal dhinaca adag. Gaar ahaan iyada oo la tixgelinayo in qayb weyn oo ka mid ah lacagta ay ku sii jirto shirkadaha rikoodhada wax yarna ay gaadho farshaxanada. Xaqiiqdii, sida laga soo xigtay tirakoobyadii ugu dambeeyay ee ay daabacday Trichordist waxay muujineysaa in Apple Music ay tahay mid ka mid ah adeegyada ugu mushaharka badan fanaaniinta, taasoo ka dhigan 25% dhammaan dakhliga soo qulqulaya kaliya 6% ee isticmaalka.
Xalka mustaqbalka ... iyadoo aan loo jeedin in badan la beddelo
Ugu dambeyntiina, Guddigu wuxuu soo gabagabeeyay in si loo horumariyo xuquuqda muusigga ee farshaxanleyda waa inay wax ka beddelaan dhinacyada qaarkood macno ahaan in adeegyada muusiggu ay leeyihiin udub dhexaadkooda. Xalalkaani waxay ku saleysan yihiin shan baloog waaweyn:
Mushahar loo sinaado
Dakhliga isku midka ah ee qorayaasha heesaha
Samaynta daraasad ku saabsan awoodda suuqa ee warshadaha muusikada
Algorithms cadaalad ah oo hufan iyo liisaska liiska
Isagoo Kahadlaya Dareenada Ku Saabsan Ilaalinta Dowlada ee Fanaanka
Waan arki doonaa sida ay muhiim u yihiin milicsigaan ka yimid dowladda UK. Xaqiiqdii, dhammaan faragelinta guddiga, tilmaamo ayaa laga bixiyay iyagoo ku boorrinaya Mareykanka iyo Yurub inay iyagu mas'uul ka noqdaan arrimaha ka taagan dhulkooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple Music iyo taxaddarkeeda marka laga hadlayo isbeddelada ku dhaca muusikada muusikada
IOS 15 waxay macsalaameyneysaa kaararka socdaalka iyo dhacdooyinka dhacay Wallet